Firenena mpanonofy fialantsasatra i UK
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Firenena mpanonofy fialantsasatra i UK
Ny sazy 5,000 XNUMX XNUMX £ vaovao ho an'izay mikasa ny handeha any ivelany dia nanakana ny nofinofin'i Britain fialan-tsasatra
38% an'ny Brits no mikasa ny hanao fety hananana zavatra tsy ampoizina
Ny 1 amin'ny 4 ao amin'ny Brits dia maniry fialan-tsasatra manokana ho an'ny endrika nofinofy sy drafitra miaraka amin'ny famandrihana
Ny ankamaroan'ny Brits dia vonona handany bebe kokoa amin'ny dia amin'ny 2021
Ny fikarohana vaovao dia nanambara izany Grande-Bretagne dia firenena mpanonofy raha resaka drafitra fialantsasatra. 73% amintsika no mikasa ny hanao karazana fialantsasatra amin'ity taona ity, ary ny 38% amintsika dia mila fialantsasatra mba hananana zavatra andrasana fotsiny. Ary iza no afaka manome tsiny ny olona te-handositra tamin'ity taona lasa ity?
Ny zava-dehibe indrindra ho an'ireo mpiasan'ny dia sy mpizahatany dia asehon'ny fikarohana fa 1 amin'ny 4 Brits te-hanao dia manokana ho an'ny lafiny fandrindrana. Ny famelana ny olona hanonofy sy hamolavola ny fialantsasatra faran'izay tsara dia tsy voavidim-bola, ary ny mpitsangatsangana dia tokony hampiasa an'io singa fototra amin'ny fizotry ny famandrihana io.
Mety ho te hiala sasatra ny firenena - ary ny 54% dia vonona ny handany mihoatra ny mahazatra - saingy ny olana dia mijanona eo fa maro no tsy matoky tena loatra amin'ny famandrihana. Tsy mahagaga, ny tebiteby manodidina ny fitsangatsanganana ao amin'ny COVID-izao tontolo izao dia manakana antsika tsy handray ny laharana ary hamandrika ny diantsika nofinofy. Ny lalàna vaovao mandràra ny fivezivezena any ampitan-dranomasina raha tsy hoe tsy madiodio ary ny fitomboan'ny tranga COVID-19 any Eropa dia vao mainka manampy trotraky ny fanahiana ataon'ireo mpivahiny. Izao no fotoana tokony hampiasan'ny mpandraharaha fitsangatsanganana vahaolana tsotra momba ny drafitra ho an'ny fianakaviana sy ny namana izay mitady fialan-tsasatra any ivelany - mamela ny mpanjifa hiantoka ny famandrihana 2021 na 2022 faramparany amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola. Ity fomba ity dia mety handresy orinasa ho an'ny sehatry ny fitsangatsanganana mitolona, ​​sady manome zavatra ny olona andrasana amin'ny taona ho avy - fandresena fandresena ho an'ny rehetra.
Ny sehatra famandrihana nomerika tsy misy fihoaram-pefy sy manome aingam-panahy, miaraka amin'ny foto-kevitra 'boky izao, mandoa taty aoriana' dia mety ho ilay zavatra izay hanova ny fizahana fialantsasatra ho famandrihana fialantsasatra. Ireo orinasam-pitaterana dia manana fotoana tsy manam-paharoa hanararaotana ny fomba fisainana nofinofy, hampiorina ny fahatokisan'ny mpanjifa ary hanorina tsy fivadihana.
Manohana bebe kokoa an'io fisainana io ny fikarohana - maniry ny 'tsotra sy mora' fotsiny ny mpanjifa, aleony miaraka amin'ny sarany fanafoanana aotra sy ny safidy hamandrihana izao, mandoa avy eo.
Amin'ny alàlan'ny fandinihana ny fizotran'ny famandrihan-dry zareo izao, ny orinasan-dia dia mety hovalian'ny mpanjifa sambatra sy matoky any aoriana any.
Qatar Airways manohy ny sidina mankany Mykonos